Usoro nke fertilization nke egg
Nne Achọrọ m nwatakịrị
Dị ka ị maara, usoro imepụta mmadụ na-eme omume naanị otu ugboro n'ọnwa. Ọ bụ n'oge a tọhapụrụ akwa egg site na ovu (ovulation), na njikọ fatịlaịza nke nwanyị na-enwe mmekọahụ. Ọ dị ezigbo mkpa na n'oge a na usoro okike nke ndị inyom, enwere ụmụ nwoke na nwanyị, nke a pụtara. enwebeghị mmekọahụ tupu oge eruo.
Usoro nke njikọta fertilization nke ovum nwere ọtụtụ nkebi. Ka anyị leruo ya anya ma gụọ isi ihe nke ọ bụla.
Kedu ka usoro nke fertilization si akwa?
Ya mere, ihe dị ka n'etiti etiti oge nsọ ahụ, oocyte na-ahapụ ya. Nke a na - eme n'okpuru nduzi nke homonụ nke na - eme ka shea gwuo ma nyere aka germ cell abanye n'ime uji eze. Site n'ebe ahụ, akwa ahụ na-agbaba na tube ahụ, ọ na-ejidekwa ya n'akụkụ ya.
Mgbe nke a gasịrị, ekele maka mmegharị ahụ nke akwara muscle, akwa ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-aga n'èzí uterine. Ọtụtụ mgbe, usoro nke spam fertilization nke egg na ụmụ mmadụ na-eme kpọmkwem n'ime tublopian tube.
Ọ bụ ebe a ka ọtụtụ spermatozoa gbara gburugburu nwanyi germ cell na-echere ya. Onye ọ bụla n'ime ha na-agba mbọ banye n'ime, ma karịa karịa, naanị otu nwere ike ime ya.
Ekele maka mmiri enzymatic nke isi mmiri ahụ na-ahapụ, iguzosi ike n'ezi ihe nke mpempe akwụkwọ dị n'èzí ahụ agbajiela. Site n'onu mmiri ahụ, spam na- abanye n'ime. N'okwu a, a na-atụfu ọkọlọtọ nke nwoke na nwanyị mmekọahụ, n'ihi na a na-eji ya naanị maka ijegharị ma enweghị mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ ọ bụla.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere otu esi atụkọta usoro nke njikọta fertilization nke nwa ahụ n'oge ụbọchị oge, ọ bụ nanị ndị inyom nwere ike ịchọta oge na-adị ọcha na-enwe ike ime nke a n'ụzọ zuru oke. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ọ ga-ewe ụbọchị iri anọ na anọ, - nke a bụ otu okpukpu nke abụọ ga-abụ mgbe ọ gasịrị.
Enwere ihe ịrịba ama nke usoro nke njikọta fertilization nke egg?
Ụdị ajụjụ a bụ ihe na-amasịkarị ndị inyom ahụ chọrọ ịchọpụta nyocha ime na mmalite nwere ike ime. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ha enwee nkụda mmụọ, ịmata na àkwá ahụ na-amụba ma na-eme ime, nwanyị ahụ enweghị ike.
Dị ka a na-achị, nwa agbọghọ dị afọ iri na ụma na-achọpụta na ọ bụrịrị mgbe ọ na-egbu oge na ịmalite ịhụ nsọ nwanyị, ya bụ. ihe dika izu 2 mgbe enwere mmekọahụ.
Kwa ọnwa mgbe IVF gasịrị
Usoro echiche banyere nwatakịrị
Uwa na fibroids na ime ime
Ịmụ nwa na ime ime
Homocysteine ​​na ime atụmatụ ime afọ
Usoro IV IV
Kedu ka esi tụọ ime mgbe nsọtụ gasịrị?
Esi ewepu Dyufaston?
Laparoscopy na afọ ime
Nhazi nke akwa
Ntọala basal maka ịzụ nwa
Catherine Zeta-Jones kpochapụrụ ekworo ya na mbido ihe nkiri ahụ bụ "Agha Nna"
Khachapuri na yogọt
Jennifer Lopez na-enwe obi ụtọ na-eche ihu mgbasa ozi mgbasa ozi mmiri
Chebureks na yogọt
Cod fillets - Ezi ntụziaka
Mattel eweputara ọtụtụ ụdị bekee Barbie nke a raara nye ụmụ nwanyị pụrụ iche
Ogwu iji belata agụụ
The Island nke Ụlọ Mkpọrọ
Goulash mere site na chicken fillet
Ihe ngosi nka nke islam
Ụmụntakịrị 27 bụ ndị jiri ezi obi na obi ha kpọrọ agbamakwụkwọ!
Silicone na-etolite "enwe"
Akwụkwọ na foto maka ime
Ngwá mmiri na-eguzogide mmiri na-asa ahụ n'ime ime ụlọ ịwụ - otu esi ahọrọ ezigbo mkpuchi dị elu?
Ọkụ na urethra na ụmụ nwanyị
Rụọ ụgbọ ala na Mallorca
Akara taịliki n'elu ala
Chanakhi na Georgian - uzommeputa
Na Instagram nke Guillaume Cane pụtara foto nke ụra Marion Cotillard
Pizza na ọkụkọ na mushrooms